रिलिज भयो’जिरो’को ट्रेलर, बाम पुड्के शाहरुख ! • Gazzabko Online
रिलिज भयो’जिरो’को ट्रेलर, बाम पुड्के शाहरुख !
Gazzabkoonline || November 2, 2018 at 8:04 pm
बलिउड सुपरस्टार शाहरुख खान अभिनित फिल्म ‘जिरो’ को ट्रेलर रिलिज भएको छ । शाहरुख खानको जन्मदिनको अवसरमा शुक्रवार अर्थात आज ट्रेलर रिलिज गरिएको हो । बाम पुड्के ब्यक्तिको भूमिकामा देखिएका शाहरुख अभिनित ‘जिरो’ को ट्रेलरले राम्रो प्रतिक्रिया बटुलेको छ । ट्रेलर हेर्दा अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक अपाङ्ग महिलाको भूमिकामा छिन् भने अर्की अभिनेत्री कट्रिना कैफ फिल्ममा पनि सुपरस्टार अभिनेत्रीकै भूमिकामा देखिएकी छिन् । छोटो कदका शाहरुखले पुड्को भए पनि अनुष्का र कट्रिना दुबैसँग रोमान्स गरेका छन् ।
आनन्द एल रायको निर्देशनमा बनेको जिरोमा कयौँ बलिउड स्टारहरुको पनि गेस्ट एपिरियन्स गरेको छ । तर ट्रेलरमा भने त्यो देखाइएको छैन् । ३ मिनेट १३ सेकेन्डको ट्रेलरमा शाहरुखलाई बाम पुड्के रुपमा प्रस्तुत गर्दै रमाइलो रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।